Yaa ina xasuuqay? (WQ: Nuur Xaaji Xiiray) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Yaa ina xasuuqay? (WQ: Nuur Xaaji Xiiray)
Dadku waxay ku odhanayaan koonfur ayaa na xasuuqday, anigu u malayn maayo inay koonfur ku xasuuqday
Bal ka soo qaad qof hadii uu ceel kugu rido ay bahalo ku jiraan, marka aad ceelkaa ku dhacdo maxaad samayn, waxaad bixin naf iyo nafiis sidii aad bahaladaa iskaga celin lahayd ceelkana uga soo bixi lahayd.
bal ka waran dhibtii ku gaadhay ceelkaa ka soo bixidiisa hadii aad ku eedayso ceelkii iyo bahaladii aad ceelka kula dagaalantay oo aad had iyo goor uun tidhaa bahaladaasi iyo ceelkaas waa cadawgayga, sow dadku kula yaabi maayaan, oo odhan maayaan waxba ka yara si ah. Oo aad iska illowdo cidii kugu riday ceelka.
Imika inaga ayaa sidaa ka dhigan koonfur baa na xasuuqday hanagu soo qaadina, waa bahalo uun aad gurto, oo aad illowdo kuwii koonfur kugu soo tuuuray ee ceelkaa billaa shuruuda kuugu riday, miyaanay kuwa kugu riday ceelka koonfureed dambiga lahayn, maxaad koonfur dhakaduun uga saarantihiin, maskaxdiinu caadi maaha.
Markaad ku tidhaa kuwii inagu soo riday waar maxaad godkan koonfureed billaa shuruud noogu soo rideen, waxay ku odhanayaan soomalii jacayl ayay naga ahayd, bal beenta ay sheegayaan day ee caqligeena ugu ciyaarayaan, hadii soomalii jacayl dhab ka tahay sees wanaagsan ayay u dhigi lahaayeen,
Waar waxa ina xasuuqay kuwa ceelka inagu soo riday billaa shuruud oo waa siyaasiga iyo waxa uu cagah ku qaato, imikana waa kuwa ina kala fadhiisiyay ee ay isugu keen jirto maxasyahay wax magartada ihi.
1994 markii woqooyiga laysku xasuuqayay ma koonfur ayaa ku xasuuqaysa, Dawladii hore ee kulmiye marka labada reer ee dhal iyo dhasheed ah is xasuuqayeen ma koonfur ayaa ku xasuuqaysay, saakana waa ta ka billaabantay sida la sheegayo, saakana ma koonfur ayaa shiday oo ina xasuuqaysa, markii dawladan kulmiye ee galbeedna ay dab ka horin gaadhay galbeed ma koonfur ayaa hurinaysay.
Nin xakiim ah ayaa wuxu yidhi hadii aad aragto dadka oo si u dhaqmaaya oo hogaamiyuhuna ama dadka hogaaminayaana eedeeyaan dadka, dadku ma qaldan laakiin nidaamka ayaa wax ka qaldan yihiin, nidaamkana yaa ka masuul ah hogaamiyaha ama hogaamiyayaasha.
Markaa dhibta ina haysataa nidaamka ayay wax ka qaldan yihiiin oo u baahan in la saxo, hadii kale xasuuqyadii hore, qaar la mid ah ayuunbaa soo noqnoqon.